Ukusonga ii-smartphones esiza kubona kuzo kwi-MWC 2019 | I-Androidsis
Zeziphi ii-smartphones ezisongelayo eziza kufika kwi-MWC 2019?
I-MWC 2019 iqala ngomso ngothotho lweentetho. Iimpawu ezininzi sele zilungiselele umsitho wokubonisa, apho baya kukwazi ii-smartphones zabo ezintsha. Kule veki, ophambili ophambili ibe yi-Samsung Galaxy Fold, Ifowuni yokuqala yokusonga yakwaSamsung. Uphawu lwaseKorea lufuna ukulindela umcimbi wefoni e-Barcelona malunga noku. Nangona kulo msitho sinokulindela iimodeli zokugoba.
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo kwaqinisekiswa ukuba sinokulindela uthotho lwe iimodeli zokusonga kulo nyaka kwi-Android. Nangona siza kuba nakho ukudibana nabanye babo kule veki ngexesha lombhiyozo we-MWC 2019. Ke siza kubona ukuba uphawu ngalunye lutolika njani eli candelo lentengiso.
3 AMARHAYA: Xiaomi
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo iHuawei iqinisekisile ubukho bayo kwi-MWC 2019, ngepowusta ongayibona kulo mfanekiso ungentla. Kuyo, kucacisiwe ukuba sinokulindela i-smartphone eya kuthi isongelwe luhlobo lwaseTshayina. Sele sikuxelele kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo Uphawu lwesiTshayina kulindeleke ukuba lungenise kwicandelo lokusonga le-smartphone kulo msitho e-Barcelona. Iya kuba yimizuzwana ngoluhlobo.
Kwakhona, ungakulibali oko Isixhobo sikaHuawei siyakuba yifowuni yokuqala ye-5G ukuba baya kubonisa. Ngaphandle kwamathandabuzo, luphawu lwentengiso. Ukongeza ekusishiyeni ngemodeli yokusonga, inye ine5G, ekulindeleke ukuba ifumane ubukho bentengiso kulo nyaka.
Ngomso ngeCawa ngo-14: 00 ebusuku. Siza kuba nakho ukwazi ukuba yintoni uphawu lwesiTshayina olulungiselele ngesi sixhobo sitsha. Umnyhadala esingazukuphoswa kuwo, ke siza kukuxelela yonke into abayivezayo kulo msitho. Into ecacileyo kukuba bayangena ukungena kwicandelo lokusonga le-smartphone ngale modeli.
I-Nubia yenye yeempawu ezithi baqinisekisile ubukho babo kwi-MWC 2019. Ukongeza ekubeni yenye enye enayo ukungena kwayo kwicandelo lokusonga kwefowuni kuqinisekisile. Ukusukela ukuba inkampani yabhengeza umsitho wokubonisa, oza negama elithi Flex Ubomi Bakho. Kucacile ukuba sinokulindela ukuba isixhobo siza kugobeka kwicala laso. Nangona malunga nesixhobo ngokwaso kukho idatha encinci ukuza kuthi ga ngoku.
Kuba i-brand inelungelo elilodwa lomenzi wechiza esine-smartphone esimile njengewatchwatch, ukuze iphindwe kabini njengewotshi. Kodwa akukho datha yokuba ingaba le yimveliso abazakuyibonisa e-Barcelona. Ngoko ke, kuya kufuneka silinde. Kwimeko yakho, akukho mhla othile. Siyazi kuphela ukuba iNubia izakuba kwi-MWC 2019, kodwa abanamsitho ucwangcisiweyo onje ngeHuawei okanye iSony, apho banokuthi babonise khona esi sixhobo sokugoba.
IXiaomi yenye yeempawu ezininzi ezisebenza ekusongeleni ii-smartphones. Uphawu lwaseTshayina sele lusibonisile kwimowudi yelungelo elilodwa lomenzi, gu qulela o i vidiyo esi sixhobo kulindeleke ukuba sisungule ezivenkileni kulo nyaka. Nangona kungekho nto iqinisekisiweyo malunga nokunikezelwa kwayo. Kwiiyure zokugqibela bekukho amajelo eendaba abonisa ukuba bazakuwubonisa kulo msitho kunye nomboniso wamazwe aphesheya weXiaomi Mi 9, ebesele enziwe kule veki ngokusemthethweni.
Kungenxa yoko, Okwangoku ngamarhe angaqinisekiswanga. Nangona ngaphandle kwamathandabuzo, iya kuvumela ukwandisa inani leemodeli ezisongiweyo kwi-MWC 2019, ukongeza ekuveliseni umdla omkhulu. Kungenxa yokuba ithembisa ukuba sisixhobo esahluke ngokupheleleyo kwezinye izinto ezinazo kuphuhliso. Kodwa asazi ukuba baya kuba nayo na le fowuni ngomso. Sinethemba lokufumana isiqinisekiso kwiiyure ezimbalwa ezizayo. Ngaphandle koko, ngomso siya kuba nakho ukusombulula amathandabuzo kwinkcazo-ntetho yakho.
Yeyiphi kwezi fowuni zisongekileyo onomdla kakhulu ukuzibona kwi-MWC 2019?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Zeziphi ii-smartphones ezisongelayo eziza kufika kwi-MWC 2019?
Ungazi njani ukuba zeziphi iinkqubo ezisebenzisa eyona RAM kwi-Android
I-Realme 3 izakwaziswa ngokusesikweni ngoMatshi 4